स्त: न बढाउन चाहनुहुन्छ ? यस्ता उपाय अपनाउनुहोस् ! शिशुको लागि अमृत मानिने स्त:न उ’त्तेजित अंगपनि हो । स्त:न शिशुका लागि दूध बनाउन मात्र होइन् । यौ:नका दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । किशोरावस्थामा पुगेपछि हार्मोनको प्रभावले युवतीहरूमा स्त:नको विकास तीव्र गतिमा हुन थाल्छ । स्त:नको वृद्धि धेरैजसोमा ११ वर्षको उमेरमा सुरु भएर १५ वर्षमा पूरा हुन्छ । स्त:नको आकार तथा आकृतिको महिलाको मानसिकतामा महत्वपूर्ण प्रभाव हुन सक्छ । स्त:नसँग आत्मसम्मानको कुरा पनि जोडिएको हुन्छ । यसको आकार वा आकृतिका बारेमा स्वास्थ्यभन्दा सुन्दरताका कारणले बढी चिन्ता गरिने कुरा अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् ।
तपाईंको उचाइ ५ दशमलव ४ इन्च र तौल ४५ किलोग्राम छ, भने तपा